Masjidul-xaraam - Wikipedia
Masjidul-Xaram Waa masjidka ugu mudan muslimiinta waxa uu kuyaalaa bdhtamah magaalda Mekka ee wadan Sacuudi Carabiya Masjidka waxa Bdhtamaha kaga taala Kacbada sharaftaleh. waana goobtii ugu horaysay waa kacnadee ee loo dhiso in Allah lagu caabudo.masjid al xaramku waa qiblada ay muslimuuntu u jeesato marka ay tukanyaa.waxay ay muslimiintu rumaysanyihiin in salaada lagutukadaa ay u dhiganto 1000 kunun oo salaadood.
Masjid Al Xaramka
1 Taariikhda Masjidka
1.1 Islaamka kahor
1.2 Xiligii Rasuulka S.C w.
1.3 xiligii Khaliifada
2 Masjid Al-Xaramka wakhtigii Umawiyiinta
Sida Muslimiinturumaysantahay waxa la aasaasay kacbada xiligii Nabi Aadam C.S. laakiin way duntay ilaa ilaahay uu u waxyooday Nabi Ibraahim in uu dib u dhiso.sidaas ayaa ilaahay ku amaray nabi Ibraahim in uu Xaramka bineeyo oo uu dib u dhiso. Xajar Al aswadkana waxaa keenay oo janada kasoo qaaday Malak Jibriil ma uu san madoobayn markii hore laakiin waxa uu lamdoobaaday sida uu Nabigu sheegay xumaanta iyo khaladka dadka Xunxun.
Kadib hadana waxa kacbada markale dib ay qurayshi u dhistay kadib markii Caam alfiil uu dab qabsaday.
Xiligii Rasuulka S.C w.Edit
Kadib markii uu Nabigu Maka Furay waxa uu kacbada ka dhameeyya dhamaan wixii asnaam ahaa ee jahiliintu ay ku caabudi jireen.
Xiligii Abuubakar Alsidiiq waxa uu ahaa masjidku sidiisii oo waxba lagama bedelin laakiin Khaliifkii ka danbeeyaya oo ahaa Cumar bin Khadaab ayaa arkay in loobaahanyahay in la balaadhiyo Xaramka kadib markii umadii islamka ahayd ay balaadhaty. sidoo kale Cusmaan bin Cafaan waxa uu xiligiisii kabedely waxyaabo badan waa uu wayneeyay.
Masjid Al-Xaramka wakhtigii UmawiyiintaEdit
malahayn Masjidku Xiligii nabiga C>S iyo xiligii khulafaada minbar cidii ugu horaysay eeminbar u yeeshaaa waxa ay ahayd Mucaawiya Bin abisufyaan taariikhduna waxa ay ahayd 40 hijriga.
Xiligii Wliid Ibn malik waxaa la aqoonsanyahay in uu ahaa cidii ugu haoraysay ee masjidka u yeesha tiiraraka rukhaamka ah. waxa kale oo uu balaadhiyaya dhanka bari ee masjidaka.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Masjidul-xaraam&oldid=198962"
Last edited on 9 Febraayo 2020, at 15:33
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 9 Febraayo 2020, marka ee eheed 15:33.